Automlọ akpaaka: ọnọdụ dị ugbu a na ngalaba na uru nke sistemụ arụmọrụ ụlọ | Akụkọ akụrụngwa
Ọnọdụ dị ugbu a na uru nke akpaaka ụlọ
Nacho Cuesta | | Automlọ akpaaka
N’isiokwu a, anyị ga-agba mbọ ịkọwapụta ọnọdụ dị ugbu a akuku dị ka abụrụ na-akpali dị ka akpaaka ụlọ. Nke mbụ, ọ ga-adaba adaba iji nwaa ịkọwapụta ihe akpaaka ụlọ bụ.
1 Kedu ihe bụ akpaaka ụlọ?
2 Uru elele site na akụrụngwa ụlọ
2.1 Automlọ akpaaka
2.1.2 Ntụ oyi
2.1.3 Ndị ìsì
2.1.4 Njikọ ụlọ ọrụ
2.1.5 Ọrụ ihu
2.2 Automlọ akpaaka n'ụlọ na ngalaba
3 Systemsdị usoro akụrụngwa ụlọ
3.1 Ikuku vs wireless
3.2 Standard vs proprietary usoro
4 Kedu ihe nrụnye akụrụngwa ụlọ gụnyere?
5 Ihe atụ
Kedu ihe bụ akpaaka ụlọ?
Na nkenke, enwere ike ịkọwa ya dị ka sistemụ nwere ike ijikwa na ijikwa nrụnye ọ bụla na ụlọ (site na ya na mpụga ya) dị ka ntụ oyi, ọkụ, injin, nchekwa, igwe okwu, wdg.
Akụkụ bụ isi nke nkọwa ya dị na nhaziN'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, usoro kpo oku nke enwere ike ịchịkwa site na ịntanetị abụghị usoro akpaaka ụlọ, ebe ọ gaghị enwe ike ijikwa nrụnye ndị ọzọ. Nke a bụ akụkụ dị oke mkpa ebe ọ bụ na ọtụtụ oge ka onye ahịa ahụ nwere mgbagwoju anya na nkọwapụta "akpaaka ụlọ" maka akụrụngwa na-abụghị n'ezie.
Uru elele site na akụrụngwa ụlọ
na uru nke usoro akụrụngwa ụlọ na-enye ha sara mbara nke ukwuu, ọ pụtakwara nke ọma ma ọ bụrụ na ọdịiche dị n'etiti etiti ụlọ na ndị isi. N’ụzọ ezi uche dị na ya, ebumnuche na uru dị iche iche nke gụnyere akpaaka ụlọ dị iche iche dabere n ’ụdị ụlọ a na ojiji ya.
N'ihe banyere ụlọ, echichi jikọrọ ya na nkasi obi na ịdị mma, n'agbanyeghị na akụkụ dị ka nchekwa na nchekwa nchekwa na-etinyekwa aka. Maka nke a, ihe atụ ndị a bụ:
Otu ihe mejupụtara mejupụtara njikwa ọtụtụ nrụnye na otu iwu. Dịka ọmụmaatụ, site na iji usoro site na ngwa, ọ ga-ekwe omume ịgbanye TV na ọwa kachasị amasị anyị, gbanye ọkụ na 30% ike, belata ihe mkpuchi ahụ ma tọọ ọnọdụ okpomọkụ nke ụlọ ahụ na 21º.
Mmetụta nke mepụta gburugburu ma ọ bụ ikiri ọkụ N'ime ụlọ ọ bụ, n'otu oge ahụ dị mma, dị egwu, ebe ọ bụ na onye ahịa ekwesịghị ịgafe ụlọ iji nweta ọnọdụ ziri ezi.
O kwere omume na-achịkwa ma AC na kpo oku site na otu ngwaọrụ agbakwunyere, na-elele okpomọkụ dị iche iche ma na-ejikwa ha nke ọma.
Iji maa atụ, ọ bara uru ma baa uru iji mee ka ndị ìsì jikọtara ọnụ mgbe ha na-ahapụ ụlọ. Ọ bụkwa ihe a na-ahụkarị mbipụta nke oge iji wedata ma ọ bụ bulie ya n’oge ụfọdụ. Nke a na-echekwa ume n'oge awa mgbe anyanwụ dara na windo ozugbo.
Njikọ ụlọ ọrụ
Inwe "akụrụngwa niile n'otu" na - eweta nkasi obi dị ukwuu maka onye ọrụ, onye nwere njikwa nke ịgba mmiri, ntinye vidiyo, ebe igwu mmiri, ibo ụzọ, wdg. Na nkwụ aka ya.
Nke a bụ otu akụkụ bụ isi, ebe ọ bụ ihe na-enye mmetụta nke njikwa na nkasi obi n'ezie. Site na ihuenyo mmetụ, usoro pụrụ iche ma ọ bụ ngwa mkpanaka, ọ ga-ekwe omume ịme njikwa zuru oke nke nwụnye, gụnyere njikwa nke ndị ọhụụ niile, ijikwa ọtụtụ nyiwe ọdịnaya na ahịa.
N'ikpeazụ, nchekwa ụlọ na-akwụ ụgwọ karịa, ebe ọ bụ na anyị na-achọpụta, dịka ọmụmaatụ, ịkpụ mmiri na / ma ọ bụ gas na-enye ma ọ bụrụ na ụcha mmiri, nchọpụta nke ọkụ, wdg.
Automlọ akpaaka n'ụlọ na ngalaba
Anyị ghọtara otú nke atọ ụlọ maka họtelu, ọfịs, ebe ngosi ihe mgbe ochie, gọọmentị, ụlọ nrụpụta, wdg.
Na nke a na ụdị ụlọ, Nsonye nke ụlọ akpaaka na-fundamentally jikọọ na Mbelata ego site na ike nchekwa na ndozi nke ụlọ ọrụ. Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ:
Site na ihe omuma: N'ọtụtụ ụlọ, enweghịzi ndị ngbanwe, ebe ọ bụ na pasent nke ike nke ọkụ dịgasị iche na-akpaghị aka dabere na ntinye si n'èzí.
Site ìsì na blinds: na nke a, a na-emezi "oyi akwa" nke façade nke abụọ, nwere ike ịkwụsị ma ọ bụ jiri ohere nke radieshon nke anyanwụ site na ọrụ akpaka.
Site na ntụ oyi: nwere akụkụ dị ka mmechi akpaka nke ikuku ikuku mgbe windo mepere maka ihe karịrị nkeji 3 ma ọ bụ na enweghị ndị achọpụtara na ụfọdụ ụlọ.
Site na ngwanrọ nke etiti: na nke a, ndị ọrụ mmezi ga-enwe ike ịlele ọnọdụ nke ụlọ ọrụ ọ bụla, yana rụọ ọrụ ha na-enweghị ịgagharị na ụlọ ahụ.
Systemsdị usoro akụrụngwa ụlọ
Enwere ọtụtụ ndị nrụpụta na sistemụ nke dịgasị iche iche na otu, nke dị iche na nke kachasị site na teknụzụ nkwukọrịta ha. Akụkụ a dịtụ iche na teknụzụ, mana anyị ga-anwa ịkọwa nkenke isi dị iche n'etiti ụdị sistemụ ndị dị ugbu a.
Ikuku vs wireless
Ihe dị iche iche dị iche iche bụ ma sistemụ sistemụ na-ekwukọrịta na eriri ma ọ bụ ikuku. Taa, wired sistemụ kachasị sie ike na ndị na-enye ihe ngwọta kachasị nye onye ọrụ njedebe.
Ikuku usoro (tumadi Zigbee, ugboro redio, Wifi na Zwave) enweghị ntụkwasị obi karịa ndị nwere eriri, kamakwa ngwọta kacha mma maka obere ọrụ ebe ọ na-agaghị ekwe omume ịrụ ọrụ.
Standard vs proprietary usoro
Ọdịiche ọzọ dị mkpa dị n'etiti sistemụ teknụzụ nke ụlọ ma ọ bụ nke ọkọlọtọ. Usoro ọkọlọtọ na-eji usoro nkwukọrịta, na e nwere ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na-emepụta ngwaahịa nwere ike ịghọta ibe ha n'otu ntinye. Nke a bụ ihe gbasara ọkọlọtọ KNX (nke a na-ejikarị na Europe), LonWorks (American) ma ọ bụ X10 ​​(nke na-eji mmiri na-ebugharị nke netwọk eletriki ọ bụ ezie na ejighị ya na Spain).
Banyere proprietary system, onye n’emeputa obula n’eji usoro nke ya nke nkwukọrịta, na nke ọ bụla, na oge ọ bụla ha na-atụgharịkwu uche karịa ụdị tozuru etozu.
N'oge a, ọ na-akpali mmasị ịkọwapụta ngwọta ndị na-adịbeghị anya site na ụdị ụlọ ọrụ ndị ọzọ, dị ka ọ dị Apple gị HomeKit ma ọ bụ Google Home.
Typesdị ihe ngwọta ndị a, n'oge dịkwuo maka ụdị ụlọ ọrụ a, na-enye obere atụmatụ dabere na ụlọ, dabere na nkwukọrịta Wi-Fi iji kpọtụrụ ụfọdụ ngwaahịa nwere ike ijikwa ngwa. Mana maka oge a, enweghị ike ịtụle ya na ha nwere ike ịzaghachi maka mkpa achọrọ site na nrụnye ngwa ngwa ụlọ nke na-ejikọ ụlọ ọrụ ya niile.
Kedu ihe nrụnye akụrụngwa ụlọ gụnyere?
N’ụzọ ezi uche dị na ya, iji zaa ajụjụ a, ka anyị buru ụzọ laghachi azụ n’okwu bu ụzọ ka, dabere na usoro a họọrọ, tụlee ntinye Otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ.
N'ihe banyere wired usoro, ha chọrọ akụrụngwa ducting na omenala wiring, nke nwere mwepu nke mkpa iji mezuo chachụ na kwukwara ọrụ eletriki. Ma ya mere, ha na-enyekwa ntụkwasị obi ka ukwuu.
N'ihe banyere usoro ikuku, ọrụ ndị a agaghị adị mkpa Ihe mgbakwunye na-agbakasị ahụ, mana ọ ga-abụ ihe dị oke mkpa iji nweta zuru ezu, mkpuchi emebere nke ọma iji belata enweghị ike ha.
Ndị na-eri nke nwụnye dịgasị iche dabere na njirimara na akụrụngwa nke ụlọ a na-ekwu okwu ya, ya mere o siri ike ịnye ọnụ ọgụgụ.
N’ọmụmụ ihe ụfọdụ, e kwubiri na nkezi ụgwọ nke ịwụnye usoro akpaaka ụlọ bụ 3% nke ọnụahịa nke ụlọ ahụ n'onwe ya.
Ndị a bụ ụfọdụ akụkọ ịga nke ọma nke etinyegoro usoro akpaaka ụlọ.
Nke mbu bu mbuli elu ulo ndi nwere ulo na Madrid, nke na-etinye usoro nchịkwa zuru oke. Usoro nke emejuputara sitere na Xkpụrụ KNX, na nrụnye ụlọ niile na-achịkwa ya: ọkụ, ntụ oyi, ihe mkpuchi, ihe mkpuchi, nchebe, ntinye vidiyo, na ihe nkiri.
Ihe atụ ọzọ mana n'okwu a lekwasịrị anya na ngalaba agụmakwụkwọ ga-abụ ụlọ ọhụrụ BBVA, akpọrọ "La Vela". N'ebe ọwụwa anyanwụ nnukwu ụlọ ọrụ na-ejikọ njikwa nke ọkụ na mputa mkpuchi, na ebumnuche nke ịkwalite nnukwu nchekwa ego. Ntinye a na-echebara ihe ihu igwe ihu ka ọkụ na isi wee rụọ ọrụ.
Ndị a ha bụ isi anyụike nke ngalaba dị obosara dị ka akụrụngwa ụlọ, na ọtụtụ ngwọta na ọnọdụ. Ikekwe n'ime afọ ole na ole anyị ga-ahụ ọganihu na mmụba, yabụ anyị ga-elebara anya iji gụọ ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Automlọ akpaaka » Ọnọdụ dị ugbu a na uru nke akpaaka ụlọ
Instagram enweela mgbasa ozi ndụ na-arụ ọrụ
Sony weputara mgbasa ozi a ichota Black Friday na Playlọ Ahịa PlayStation